Socdaal Xalaal ah oo loogu tago Mostar - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Inta badan waa magaalo ku taal Bosnia iyo Herzegovina, horeyna waxay uga mid ahayd magaalooyinka ugu qowmiyadaha badan dalka, maantana waxaa ku habsaday juqraafi ahaan qoomiyadaha. Magaalada ayaa ahayd tii ugu baaxadda weyneyd ee la duqeeyo magaalo kasta oo ka tirsan Bosnia intii lagu guda jiray dagaalkii Bosnia iyo Herzegovina ka dib markii ay kala jabtay Yugoslavia. Bilowgii dagaalka, duqeymaha cirka waxay burburiyeen dhismooyin iyo dhismooyin badan oo muhiim ah, oo ay ku jiraan astaanta dhaqanka iyo ruuxiga ah: Buundadii Hore (Stari Most), oo ah a Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO.
Mostar wuxuu caan ku ahaa buundadan quruxda badan ee u eg qaabkii Cusmaaniyiinta, oo ku fidsan webiga Neretva oo loo arko inay tahay xarunta taariikhiga ah ee magaalada. Iyada oo la adeegsanayo dadaallada wadajirka ah ee bulshada caalamka, dib u dhiska The Old Bridge waxaa la dhammaystiray 2004, ku dhowaad 11 sano ka dib burburkeedii, iyadoo la adeegsanayo qaar ka mid ah goobihii asalka ahaa ee laga soo saaray wabiga Neretva. Qayb muhiim ah oo magaalada ah ayaa dib loo dhisay booqdayaashuna way layaabi karaan markay arkaan in magaaladan hore dagaalku udhacay ay tahay meel qurux badan oo qurux badan marlabaad, gaar ahaan aagga iyo hareeraha magaalada qadiimiga ah. Si kastaba ha noqotee, calaamado badan oo muuqda oo ku saabsan Mostar taariikhdiisii ​​dhowaa ee dhibaatada badnayd ayaa weli taagan.
Saldhigga basaska ee 'Mainar Main' (bariga) (Autobuska stanica Mostar), Maršala Tita, Mostar 88000. 7 AM-20PM. Saldhigga weyn ee basaska iyo tareennada laga raaco, kuna yaal qaybta bari ee magaalada Mostar, una dhow buundada Carinski iyo Jaamacadda Dzemal BIjedic. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Saldhigga basaska ee Morear (galbeed) (Mostar - zapad), Vukovarska, Mostar 88000. 7 AM- 21PM. Saldhigga basaska ee dhowaan laga dhisay qaybta woqooyi-galbeed ee Mostar (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Ka yimid Sarajevo
Waxaa jira basas badan (marka hore 06:00, ugu dambeeya 19:55 - qiyaastii. 1 saacadiiba) laga bilaabo Sarajevo ilaa Mostar. Waxa kale oo jira basas badan oo ka baxa Mostar ilaa Sarajevo (marka hore saacaddu markay tahay 06:00, ugu dambayn 18:15 - qiyaastii 1 saacaddiiba). Safarku wuxuu qaadanayaa 2,5 saacadood kharashkuna waa 17-20 BAM (waxay kuxirantahay shirkadda basaska). Jadwalka halkan ayaa laga heli karaa, laakiin basaska oo dhan kuma qorna.
Jadwalka basaska ayaa onlayn ah, laakiin isku xidhka oo dhami kuma qorna. Basaska isdaba joogga ah waxay maraan inta u dhaxeysa Mostar iyo Ploče, Dubrovnik (2 maalintii, 3-4 saacadood, BAM30), Split (4 saacadood, HRK125), Zagreb, Podgorica, Jajce (3.5-4 saacadood, BAM19), Banja Luka, Belgrade (2 maalintii) iyo inta badan magaalooyinka Bosnia iyo Herzegovina.
Xusuusnow joogsiga magaalada Mostar ee baska ka baxa Podgorica, oo kusii socda Banja Luka, wuxuu dhowr kiiloomitir u jiraa bartamaha magaalada wadada weyn. Taksi halkaas ka socda ayaa ku kacaya BAM10.
Saldhigga tareenka ee Mostar (Željeznička stanica Mostar), Maršala Tita, Mostar 88000. Fagaarayaasha waxaa la furaa 30 daqiiqo ka hor bixitaanka tareenka. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Waxaa jira laba tareen maalin kasta laga bilaabo Sarajevo ilaa Čapljina iyada oo loo maro Mostar, oo ka taga Sarajevo subaxdii iyo galabtii. Jihada kale, waxaa jira tareen subax hore ah oo ka imanaya lapljina qiyaastii 6AM subaxnimo iyo galabtii 4PM. Jadwalka waxaa laga heli karaa bogga internetka ee ZFBH. Muuqaalka tareenka saaran inta udhaxeysa Sarajevo iyo Mostar waa mid cajiib ah, oo dhex maraya dhul qallafsan oo leh taxane tunnel, U-jeed iyo viaducts. Waa wax aad u qurux badan, iyo sidoo kale ka jaban, inaad ku safarto magaalooyinkan tareen halkii aad ka raaci lahayd bas.
Hal tikid oo tikidhada ah waa 11 KM (Oktoobar 2017) waana in la iibsadaa ugu yaraan 5 daqiiqo kahor bixitaanka jadwalka ah.
Ka yimid Croatia
Ma jiro xiriir dambe oo u dhexeeya Ploče iyo Mostar. Sidoo kale ma jiro xiriir toos ah oo dheeri ah oo u dhexeeya Zagreb iyo Mostar - waxaad u baahan tahay inaad ka beddesho Sarajevo.
Waxaa jira xiriir bas oo joogto ah oo ka yimaada Dubrovnik 126 kunas (Oktoobar 2017).
Mostar ayaa si fudud looga heli karaa Galbeedka Yurub iyada oo loo sii maro Croatia. Laga soo bilaabo, Zagreb waxay qaadataa A1 (calaamadaha cagaaran ee Karlovac, Split iyo Dubrovnik). Waxaa jira xudduud looga gudbo Nova Sela - Bijača, wadada weyna waxay ku sii socotaa Herzegovina illaa dhamaadka Međugorje. Markaa kaliya raac calaamadaha illaa iyo inta ka hartay 30 ama kiiloomitir kiiloomitir ee wadada laba-haadka ah. Waxaa jira qorshooyin lagu dhisayo waddo weyn illaa iyo inta laga gaarayo Mostar, laakiin tani waxay qaadan kartaa dhowr sano oo dheeri ah.
Laga soo bilaabo Sarajevo waa labo saacadood oo muuqaal dabiici ah iyada oo loo marayo dooxada webiga Neretva. Wadadan ayaa sidoo kale la qorsheeyay in lagu casriyeeyo waddo weyn.
Madaarka Caalamiga ah ee Badiyaa (Međunarodna zračna luka - Aerodrom Mostar), Ortiješ bb, PP 04 88000 Mostar. () wuxuu ku yaal tuulada Ortiješ, 7.4 km koonfur koonfur-bari saldhiga tareenka ee Mostar. Waxaa jira duulimaadyo xilliyeed oo taga meelaha loo aado Talyaaniga oo ay ka mid yihiin Rome, Naples, Bari, Bologna (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Magaalada duqa ah ee Mostar
Buundadii Hore (Stari Badanaa). 24/7. Asal ahaan Turkidu waxay dhisteen 1566, waxaa la burburiyey 1993, laakiin dib ayaa loo dhisay 2004. Buundada ayaa ah meesha ugu muhiimsan magaalada Mostar waana a Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO. Buundada ayaa dhererkeedu yahay 21 m, waxaadna si joogto ah u arki doontaa xubno ka tirsan kooxda 'Morear Quusitaanka' ee Quusaysa buundada. Waa caado in la siiyo kaladuwanayaasha calaamado yar ka dib markay boodaan. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Old Bridge (Buundada Hore). Waxaa ka mid ah bandhigyo ku saabsan taariikhda buundada, muuqaal dusha sare ah, iyo gelitaanka godadka hoose, oo ay weheliso fiidiyoow faahfaahinaya dib u dhiska buundada. Waxay furtay 2006, xuska sanad guuradii labaad ee dib u dhiska buundada. 5 BAM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Guriga Muslibegovića (Muslibegovića kuća) (oo ku taal meel u dhow Masjidka Karađoz Bey). Waxay u furan tahay martida 15 Abriil-15 Oktoobar laga bilaabo 10: 00-18: 00. La dhisay 300 oo sano ka hor, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay guriga ugu quruxda badan laga soo bilaabo xilligii Cusmaaniyiinta ee Balkans. Gurigu wuxuu ka kooban yahay meelo u gaar ah dumarka (barxadda haweenka - haremluk), iyo ragga (barxadda ragga - selamluk). Si ka duwan qaab-dhismeedyadii hore, gurigani wuxuu u ekaa guri afar dabaq ah oo laga dhisay agagaarka Xarunta. Albaabka laba geeslaha leh oo leh tiirka dhexe ayaa muujinaya saamaynta Mediterranean. Gurigu wuxuu ilaaliyay qaab dhismeed taariikhi ah oo dhab ah, alaab iyo dukumiintiyo siinaya aragti nolosha qoys hodan ah laga soo bilaabo wakhtigaas. Ka sokow bandhigga madxafka, booqdayaasha waxaa lagu casuumay inay qaataan cabbitaanno dhaqameed ama buskudyo, ama ay habeen ku qaataan agagaarahaan dhabta ah. 4 BAM.
Matxafka Herzegovina (Muzej Hercegovine). Furan 08: 00-16: 00… Waxay leedahay sawirro kooban oo laga soo qaaday wejiyada kala duwan ee taariikhda Mostar, oo ay ku jiraan carwo yar oo laga soo qaaday wiil u dhashay oo Ra'iisul Wasaare ka ahaa Yugoslavia muddo 6 sano ah. Sidoo kale waxay muujineysaa fiidiyow aad u fiican taariikhda dhow ee Bridge Bridge. 5 BAM.
Masjidka Koski Mehmed Pasha (Koski Mehmed-pašina džamija), Mala Tepa 16. Masaajid yar yar laakiin si fudud qurux badan oo Ottoman ah oo la dhisay 1618, ayaa la burburiyey intii lagu jiray dagaalka laakiin dib loo dhisay iyada oo taageero dhaqaale laga helay Turkiga. Fuulo minaarada si aad u aragto muuqaal weyn magaalada. Kordhinta minaaradda laguma talin karo kuwa qaba claustrophobia, laakiin tallaabada 192 fuuliddu waxay ku abaalmarinaysaa aragti qurux badan oo ku taal Old Bridge. Gelitaanka: BAM 6, oo lala galo marinka: BAM 12. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masaajidka Karađoz Bey (Karađoz-begova džamija) (Magaalada Old) Masjidka Cusmaaniyiinta oo la dhisay 1557; masaajidka dhexe ee Mostar. Gelitaanka: BAM3, oo lala galo marinka: BAM5.
Qabuuro (oo ku xigta Masaajidka Karađoz Bey ee ku yaal magaalada qadiimka ah). Xadiiqad ayaa isu bedeshay qabuuro 1993 markii dadka dhintay ay u baahdeen meel lagu aaso iyo xabaalaha kale oo aan la geli karin dagaalka awgiis.
Gurigii Cusmaaniyiinta (Bišćevića kuća), Wadada Bišćevića. Guri Ottoman ah, halkaas oo kaliya aad ku arki karto qolal yar oo ku yaal dabaqa sare. 4 BAM.
Daawo dadka deegaanka oo quusanaya Buundada Old Bridge. Xubno ka socda Kooxda 'Mostar Quusitaanka' ayaa buundada ka daadin doona biyaha sumurud cagaaran, laakiin marka hore waxay isku dayi doonaan inay xoogaa lacag ah ka ururiyaan dalxiisayaasha. Ha isku dayin tan naftaada. Biyaha wabiga waxay marayaan 12 ° C oo joogto ah, waxayna si lama filaan ah ugu socdaan 30 ° C ilaa 12 ° C waxay sababi karaan wadno xanuun xitaa kuwa ugu awooda badan. Ragga maxalliga ah ee quusinaya waa inay marka hore hoosta iska gashadaan si ay u yareeyaan heerkulka jirkooda ka hor inta aysan quusin. Meesha ugu fiican ee laga daawan karo tani waxay ka hooseysaa Old Bridge oo ku taal xeebta wabiga Neretva.
Ku Soco Khadkii Hore, Bulevar Revolucije. Halkan, 1993 magaalada waxaa loo kala qaybiyey Croats Galbeedka iyo Bosniaks dhanka Bari. Waa khibrad macquul ah oo miyir leh in la arko dhismayaasha la qarxiyay oo wali ku yaal aaggan 5m oo kaliya qaybta.
Cab bunka Bosnia. Ha u oggolaan qofna inuu kuu sheego in kafeega Bosnia uu la mid yahay kaafiga Turkiga. Taabadalkeed, u oggolow dadka wanaagsan ee Cafe de Alma (Rade Bitange oo aan ka fogeyn buundada) inay wax kugu baraan qaabkan kala duwan ee loo diyaariyo kafeega. Iyaga ayaa ah kuwa kaliya ee wax cuna magaalada waxayna aad u jecelyihiin in la ilaaliyo dhaqankan. Kafeega wuxuu ku adeegi doonaa qaxwahaaga qaxwo dhaqameed, oo lagu daray farxad Turkiga ah oo macaaneysa cabitaankaaga, dhammaantood waa €, 1 calaamado ama 2 Kroatiyaanka ah. Kahor intaadan cabin qaxwadaada, shaqaaluhu waxay kuu sharixi doonaan sida loo diyaariyay iyo sida ugu wanaagsan ee loogu raaxeysto.
Calaamadda la beddeli karo ee Bosnia iyo Herzegovina (BAM) waxaa lagu dhajiyay lacagta euro-ga ah of 1 = BAM 1.95583. Dukaammada iyo maqaayadaha waxay ku aqbali doonaan yuuro qiimahiisu yahay 1: 2 oo leh sumadda beddelka ee Bosnia. Kuuroshiya kuna sidoo kale si ballaaran ayaa looga aqbalaa magaalada Mostar, oo leh 4: 1 ilaa BAM. Bangiyo fara badan ayaa ku leh shirkado hoosaadyo iyo mashiinnada ATM-ka magaalada oo dhan. Inta badan maqaayadaha ku yaal Old Town ayaa aqbali doona kaararka waxaana jira mashiinka ATM-ka oo ku xiga shirkadda dalxiiska ee ku teedsan Makhaayadaha Kulluk iyo Europa.
Laga bilaabo 2016, Wi-Fi dhakhso iyo bilaash ah oo ay bixiso TGM waxaa laga heli karaa agagaarka Stari Most (Old Bridge).
Makhaayada Qaranka Ćevabdžinica Tima - Irma, Onešćukova bb (Old Town). Čevapčići: € 3.
Pizzeria Roma (agagaarka Xarunta wax iibsiga ee Mercator, oo aan ka fogeyn garoonka Zrinjski). Pizza weyn.
Aščinica “Saray”, Karađozbegova 3. Meel fiican oo laga helo suxuun raqiis ah oo wanaagsan. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa € 2.5 ilaa € 6 oo ah cunno aad u weyn. Laga soo bilaabo BAM1.
Aleksa (Club Aleksa), Ljubića 7 (Hoteelka hortiisa Bristol waxaa ku yaalo Wadada yar ee Ljubića. Aleksa waxay ku taal dhamaadka wadada, dhanka bidix.). Makhaayad iyo maqaaxi leh teeraar webiga dul saaran. Sidoo kale waa xarunta Naadiga Aleksa, magaca abwaanka reer Martire. Cuntada maxalliga ah, jawiga wanaagsan, caalami badan ayaa halkaas taga.
Dado, Trg 1. maja bb. Kharashka dhaqameed ee Bosnia. € 9 ilaa 3 koorso cunto ah oo ay kujiraan khamri.
Hind Han, Jusovina bb. Aad loogu taliyay, in kasta oo adeeggu gaabis yahay.
Kulluk, Kurluk 1, oo leh aragti toos ah Stari Most. Muuqaal aad ufiican oo iska indha tiraya Stari Inta badan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Labirint, Kujundžiluk bb. Muuqaal aad ufiican oo iska indha tiraya Stari Inta badan. Qeyb kamid ah Hotel Bristol.
M&M, Mostarskog bataljona 11 (guud ahaan Hoteelka Bristol). Qeexitaan wanaagsan ee solay isku dhafan. BAM5-20.
Veranda (Xarunta Dukaameysiga Biosphere).
Xagee joogaa Mostar
MartidaHouse Taso, M. TITA 187 (socod 3-daqiiqo u jirta Old Town). Wi-Fi bilaash ah, booqashooyinka magaalada - tours agagaaraha Mostar. Adeeg bilaash ah 0-24h. 11 qol; 22 laba jibbaar ah.
Hostel Dahabka Buundada, 45 Mladena Balorde (Isgoyska istaanka baska / tareenka, bidix 300 m hoos Mladena). Guri yar oo hoyga leh jawi qoys, oo ay ka shaqeeyaan Stephan, iyo jikada, baarkinka, WIFI. Si fiican ayaa lagula taliyay. Qolalka hurdada € 7-9. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qolalka hostel Majda, Pere Lažetića 9 (5 daqiiqo oo socod ah laga bilaabo istaanka basaska). Tani waa hoteelkii ugu horreeyay ee ku yaal magaalada Mostar. Mulkiilaha, Majda, waa mid saaxiibtinimo badan gadaalna wuu u jajaban doonaa si uu kuu dejiyo, wuxuu kuu soo jeedinayaa maqaayadaha, baararka, indhaha, iyo safarada maalinlaha ah. Internet bilaash ah, TV, jiko, linen. Quraac iyo qaxwo lagu kariyey guriga oo bilaash ah subax kasta. Dalxiis ayaa la bixiyaa, sidoo kale. Sariirta qolka jiifka: € 10. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hostel Miturno, Braće Fejića 67 (oo ku taal dhinaca bidix ee webiga Neretva, oo 50 mitir u jirta suuqa miraha ee ka gudbaya Old Bridge). Nadiifi hudheel nadiif ah oo ku yaal magaalada qadiimka ah. Wi-Fi bilaash ah, shaqaaluhu waxay ku hadlaan Ingiriis aad u wanaagsan. 11 qol; € 20 gaar ah.
Zdrava Hrana (agagaarka xarunta). Apartment iyo hostel. Qolka jiifka: € 10; Kali ah: 30 KM; Labo laab: 50 KM.
Hoteel Nina (oo u dhow magaalada hore, 200 oo mitir u jirta Old Bridge). Nadiifi hudheelka magaalada qadiimiga ah. Internet bilaash ah, shaqaaluhu waxay ku hadlaan Ingiriis aad u wanaagsan. Khadka bilaashka ah ee laga raaco saldhigga baska / tareenka waa la diyaarin karaa. Baarkooda gaarka ah ee buundada hore waxaad ku dhadhamin kartaa cabitaannada maxalliga ah qiimaha maxalliga ah; wareegga koowaad markasta guriga ayuu ku yaal haddii aad marti ku tahay hudheelka. Intaas waxaa sii dheer socdaaladu waa weyn yihiin! Zika wuu ogyahay sheekooyinka dhabta ah maadaama uu yahay nin ka yimid wadooyinka wuxuuna kuu sheegi karaa wax walba oo ku saabsan magaalada, dagaalada iyo meelaha ku hareeraysan magaalada. € 10-15.
Hostel Bojo, sariir & quraac, Braće Šehovića 11 (U dhow aagga Old Town, 500 m u jirta, oo ku taal banka midig ee wabiga aagga la yiraahdo Donja Mahala). Hostel Bojo waxaa laga furay 2013 aagga lugeeyaha ee Mostar Center, oo qiyaastii 500 m u jirta Old Town, Hostel Bojo wuxuu bixiyaa qolal hawo qaboojiye leh oo leh kabadyaal sariir kasta, Wi-Fi bilaash ah iyo quraac bilaash ah. Martidu waxay isticmaali karaan aagga fadhiga ee beerta la wadaago oo leh tas -hiilaad barbecue oo lacag la'aan ah. Hostelku wuxuu bixiyaa qol caadi ah oo leh telefishinka fiilada, martida ayaana lagu soo dhaweynayaa inay isticmaalaan jikada si buuxda u qalabaysan oo leh meel wax lagu cuno. Musqul la wadaago oo leh qubeys iyo timo jare ayaa la heli karaa. € 11.
Sariir gaar ah iyo Quraac, Fra A. Miletića 42 (wadada ka soo horjeedka kaniisadda catholic ee Franciscan, oo ka dambeysa Darios Cafè). Soo galid: 11AM, soo bixitaan: 10AM. Waxay bixisaa dareen diiran, oo guryo ah oo aad ugu dhow Old Bridge, socodka 8 daqiiqo ah. Dhammaan joogitaanku waxay la yimaadaan quraac qaaradeed oo subaxnimo ah. Waxaa jira baarkinka gawaarida oo leh albaab aamin ah iyo garaashka qufulka. Ka fur dabka qolka fadhiga. Wi-Fi bilaash ah ayaa la bixiyaa, ama isticmaalka kombiyuutarka qaaska ah ee hudheelka haddii aadan ku safrin laptop. Maydhista iyo qalajinta dharka ayaa la heli karaa markii la codsado. . 25.
Bevanda Hotel. Waxay ku taalaa Balinovac. Ilaa iyo hada waa hudheelka kaliya ee hudheelka hudheelka ah ee Mostar. Waxay ku taal aag xasilloon oo leh dabeecad qurux badan iyo webi hoostiisa hudheel hoostiisa ah, laakiin wax aan ka badnayn 15 daqiiqo ayaa u jirta xuddunta taariikhiga ah ee magaalada. Hoteelku wuxuu leeyahay 28 qol iyo laba aqal oo raaxo leh. Qolalka oo dhami waxay leeyihiin bar yar, Pay TV, adabtarada internetka iyo balakoonka. Waxaa jira labada qol oo loogu talagalay dadka sigaarka caba iyo kuwa aan sigaarka caba. Halkaan waxaad ka heli doontaa makhaayad weyn, kafateeriya, iyo barxad weyn oo bannaanka ka baxsan oo jiifa webiga Radobolja. Sidoo kale garaashka hudheelka iyo sidoo kale baarkinka banaanka ayaa la heli karaa.
Huteelka Bristol (dhinaca midig ee buundada Musala). 45 qol, makhaayad, iyo laba qol shirar. Qolalka waxaa lagu qalabeeyay alaab cusub, qaboojiye, taleefan, musqulo cusub iyo TV-ga dayax gacmeedka. Makhaayadu waxay qaadi kartaa 150 kursi gudaha iyo dibaddaba. Fagaaraha Musala ee ku teedsan Neretva iyo Wadada Korzo ee hoteelka hortiisa waa laba ka mid ah meelaha ugu badan ee magaalada ku yaal, taas oo hudheelkan siisa wax dheeri ah.
Hotel Ero (dhinaca midig ee). 165 qol iyo sideed guri. Qolalka waxaa lagu qalabeeyay telefoonno, adabtarada internetka iyo TV-ga dayax gacmeedka. Hoteelka ayaa sidoo kale leh makhaayad aad u weyn oo bixisa cuntada gudaha iyo tan caalamiga ah. Hoteelkani sidoo kale waa ku habboon yahay shirarka. Hoolka muraayadda ayaa ah kan ugu weyn oo leh illaa 100 kursi, intaas ka dib waxaa jira buluug iyo hoolalka caddaanka oo leh illaa 50 kursi. Dhamaan qolalka waxaa lagu qalabeeyaa mashruucyo iyo fiidiyoowyo. Bannaanka hoteelka waxaa ku yaal meel gawaarida la dhigto oo loogu talagalay dadka soo booqda.
Mostar Old Bridge View Villas. Saddex ayaa si buuxda u qalabeeyay laba qol jiif oo leh dabaqyo ku yaal Wabiga Neretva si toos ahna u fiirinaya inta badan Buundada Oldar.
Motel Diido Mostar, Kapetanovina 1 (Xarun ku taal magaalada Old oo kaliya 50 m u jirta buundada hore). Gelitaan: 12:00, out-out: 11:30. 10 qol oo leh air-con, telefishanka telefishanka, musqusha oo leh qubeys, balakoonka oo leh muuqaal ku yaal magaalada Old iyo buundada Old, maqaayada nooca xidhan, baarkinka iyo isku xirka khadka bilaa internet oo bilaash ah martida.
Motel Demadino, Muje Bjelavca 5. Muuqaal nadiif ah. 48.
Motel Emen (Old Town). 6 qol. Internet bilaash ah.
Ballaarinta Oscar (10 mitir buundada). Qolalka ayaa aad u nadiif ah, oo leh telefishan iyo hawo-qaboojiye oo qiimaha ayaa si layaableh u hooseeya.
Fadhiga Mostar (2 daqiiqo marka laga tago buundada wadada weyn). Qolalka waa kuwo saaxiibtinimo leh, deggan oo waasac ah, oo ku qalabaysan TV iyo balakoonka. Musqusha oo aan nadiif ahayn, milkiilaha Marijana oo saaxiibtinimo leh oo Ingiriis wanaagsan leh. 15.
Sariirta Shangri-La iyo Quraacda (agagaarka Buundada Hore). Qolalka oo dhan oo leh TV, internet, hawo-qabsi, qubeys. Baarkinka waa la bixiyay.
Villa Sann, Lacina 14 (2 daqiiqo oo socod ah oo laga bilaabo bariga weyn Mostar istaanka basaska.). Buundada Old waxaa lagu gaari karaa 10 daqiiqo oo kaliya adiga oo lugeynaya. Villa Sann waxay bixisaa baarkinka gaarka ah ee martida iyadoo lacag laga qaado.
Villa Sara, Sasarogina br. 4 (masaafad u jirta meesha laga raaco tareenka / istaanka basaska iyo magaalada qadiimiga ah. Saldhigga ilaa madax ilaa buundada una leexo bidix waxyar ka hor intaadan gaarin. Sii wad ilaa 3 daqiiqo wadada dhinaceeda - ma dhaafi kartid calaamada, xitaa habeenkii.). Goob wanaagsan, sariiro hufan Qolalka dabaqa labaad waxay leeyihiin sida ugu dhakhsaha badan ee loo maro barxadda iyo muuqaalka magaalada iyo buuraha. Sariirta qolka jiifka: € 10; Labalaab: € 25
Hoteelka Pellegrino, Faladžića 1C (10 daqiiqo oo ka socota Old Bridge). Ka badan dhisme dabaq ka badan hoteel. Quraac aad u fiican. € 68.
Qalcadda qadiimiga ah ee Stjepan-grad ee u dhow Mostar
Qaar badan oo ka mid ah goobahan way adag tahay in lala gaaro gaadiidka dadweynaha; si kastaba ha noqotee, dhowr hay'adood sida Herzeg Day Tours waxay bixiyaan safarro hagitaan ah.
Počitelj -magaalo Bosnian ah oo si fiican loo ilaaliyo oo laga soo bilaabo 1383 taas oo 35 km koonfur ka xigta Mostar. Waxaa lagu gaari karaa gaadiidka dadweynaha iyadoo la raacayo baska jaalaha ah #41 xagga Čapljina muddo 45 daqiiqo ah. Muuqaal aad u wanaagsan oo ah Webiga Neretva. Intii lagu jiray qarniyadii dhexe, Počitelj waxaa loo tixgeliyey Xarunta maamulka iyo Xarunta maamulka ee gobolka Dubrava župa. Magaaladu waxay leedahay dhowr makhaayado yaryar, dukaamo qaxwo iyo iibiyeyaal waddo oo iibiya miraha iyo alaabta xusuusta leh ee maxalliga ah.
Blagaj - waa tuulo 12 km koonfur bari ka xigta Mostar. Waxaa lagu heli karaa baska dadweynaha 10 15 daqiiqo 2.25 (2 KM, istaaga Španski trg ee Gimnazija horteeda). Basku wuu ka tagi karaa wadada ka soo horjeedka saldhiga weyn, ma tagi karo xarunta basaska lafteeda. Blagaj, webi karst ah ayaa ka soo baxaya buur. Waa wax aad u qurux badan, oo leh biyo buluug ah oo qoto dheer. Tekke taariikhi ah ayaa laga dhisay buurta. Haweenka waa inay xirtaan xijaab si ay u galaan tekke-ga. Kalluumeysiga ayaa lagu beeray webiga, dhowr makhaayadood oo heer sare ahna waxay u adeegaan kalluun leh fadhiga webiga. Waxaa ku yaal qalcad qadiim ah oo leh aragtiyo cajiib ah buurta dusheeda. Raac jidka soo dhaafay tuulada “magaaladii gabowday” ka dibna weydii meesha ay raadku ka bilaabmayo, ama kaliya raac wadada (dhinaca midig u hay) halka ay ubaxday wadada (waxaad arki doontaa dhowr dhagax oo qadiimi ah) waxaadna ka heli doontaa wadada midigtaada Raadku wuxuu ku saabsan yahay 17 km. Waxaa ku yaal xeryo fara badan Blagaj oo si toos ah ugu dhow webiga Buna. Velagićevina (Aqalka Velagić) waxaa la dhisay qarnigii XNUMXaad waana tusaale qurux badan oo ku saabsan qaab dhismeedka dhismaha ee Ottoman, oo ah qaab hal-sheeko ah oo leh balbalooyin caadi ah. Agagaarka sidoo kale waxaa ku yaal makiinado bur bur ah oo duug ahaa oo waagii hore ku shaqeyn jiray webiga Buna ee xoogga badan. Waxaa jira laba aqal oo martida ah oo ay ku jiraan Ottoman Villa Velagomed Hotel.
Međugorje, oo 25 km u jirta Mostar, ayaa caan ku ah dadka xujayda ah sababo la xiriira muuqaal barakeysan oo ay leedahay oo lagu magacaabo 'Holy Virgin Mary' oo loogu talagalay dhalinyarada magaalada. Basasku waxay ka baxaan xarunta basaska dhowrkii saacadoodba mar.
Stolac - magaalo duug ah oo Cusmaaniyiinta oo leh qabuuraha qarniyadii dhexe Radimlja (Nekropola Radimlja), goobta Illyrian ee Daorson iyo rinjiga godka palaeolithic ee Godka Badanj (Pećina Badanj).
Dooxada Drežanka, 25 km waqooyi ka xigta Mostar, waxay caan ku tahay isboortiga banaanka sida baaskiil wadida, socodka socodka, baaburka, iyo fuulitaanka. Wabiga Drežanka waa biyo mareenka Neretva, labada webi waxay ku biiraan haro biyo-mareen ah oo dabiici ah. Bas u raac dhanka Drežnica - waxaa jira basas taga illaa dhammaadka qulqulka, Gornja Drežnica. Ama tareenka u raac dhanka Sarajevo oo ka deg meesha tareenku istaago ee Drežnica, qiyaastii. 30 daqiiqo Waxaa jira dhowr goobood oo xero ah iyo hoy aasaasi ah, in kastoo aad u baahan doonto qalab isboorti oo kuu gaar ah.
Meelo dheeraad ah
Ploče, Croatia - waa magaalada ugu dhow xeebta magaalada Morear, waana mid si fudud loo heli karo basas fara badan iyo tareenno maalinle ah. Xeebaha ayaa ugufiican dabaasha waqooyiga magaalada.
Jablanica - waa magaalo udhaxeysa Mostar iyo Konjic, oo hoy u ah Dugopolje necropolis.
eHalal Safarka Mart > Boosniya iyo Herzegovina Xalaal Safar > Xalaal Safarka Mostar